प्रति फिल्म १५ करोड पारिश्रमिक लिन्छन् अल्लु अर्जुन : बस्छन् यति करोड पर्ने घरमा !! - Experience Best News from Nepal
प्रति फिल्म १५ करोड पारिश्रमिक लिन्छन् अल्लु अर्जुन : बस्छन् यति करोड पर्ने घरमा !!
अभिनेता अल्लु अर्जुन दक्षिण भारतिय फिल्मको तेलेगु भाषाका चर्चित स्टार हुन्। धेरैले उनलाई ‘आर्या’ नामक फिल्मका कलाकारका रूपमा चिन्छन्। उनलाई तेलेगु फिल्म उद्योगका स्टाइलिस स्टार मानिन्छ। उनी तेलेगु फिल्मका महँगा स्टारसमेत हुन्।
उनी तेलेगु भाषीका माझ नभई भारतभर र अन्य देशमा पनि उत्तिकै चर्चित छन्। उनी नेपालमा समेत रूचाइने कलाकार हुन्। यूट्यूबमा रिलिज गरिएका उनी हभिनित हिन्दी डब फिल्मले पछिल्लो समय ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाउने गरेका छन्।
उनी अभिनित ‘सरैनोडु’को हिन्दी डब भर्सनले युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको भारतिय फिल्मको कीर्तिमान कायम गरेको छ। यसबाट उनको लोकप्रियताको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन्।
सन् २०१६ मा रिलिज भएको फिल्मको डब भर्सन यूट्यूबमा सन् २०१७ मे २८ मा रिलिज भएको थियो र फिल्मले १४ करोड ५८ लाखभन्दा बढी भ्युज कमाएपछि फिल्म यूट्यूबमा सर्वाधिक भ्यूज पाउने भारतीय फिल्म बन्न पुगेको छ। उनको यस फिल्मले व्यापार र लोकप्रियताको हिसाबले फराकिलो मानिएको बलिउड फिल्मलाई समेत पछाडी पारेको छ। कीर्तिमान राख्न सफल भएको हो।
अल्लु अर्जुनको गिन्ती पछिल्लो समय सर्वाधिक पारिश्रमिक बुझ्ने तेलेगु फिल्मस्टारका रूपमा दर्ज छन्। रिपोर्ट अनुसार उनले प्रति फिल्म १३ देखी १५ करोड भारू पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन्।
महँगो पारिश्रमिक बुझ्ने स्टारको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि फिल्म नै हो। उनको जीवनशैली उस्तै लोभलाग्दो छ। उनी बस्ने घरको मूल्यबाट नै सोको अनुमान लगाउन सकिन्छ। अल्लु बस्ने घरको मुल्य बारेमा कमै जानकारी छ।
हैदराबादमा उनी १०० करोड भारूको घरमा बस्छन्। उनको सो मूल्यको घर बाहिरबाट हेर्दा बाकस जस्तो देखिन्छ तर उनको घरको आन्तरिक साजसज्जा निक्कै भव्य छ। उनको घरमा अत्याधुनिक घरमा हुनुपर्ने सबै सुविधाहरू छन्।
त्यस्तै अल्लु सुपरस्टार अभिनेता चिरञ्जिवीका नातेदार हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छेन्। उनी फोब्स इन्डियाको टप १०० अभिनेताको सूचिमासमेता आटाएका अभिनेता हुन्। उनी सो सूचिको ५० स्थानमा परेका थिए।१५ फिल्ममा काम गरेका अल्लु २ वर्षको उमेरदेखी अभिनयमा सक्रिय छन्।
विराट कोहलीसँगको सम्बन्ध बारेमा पहिलो पटक बोलिन् तमन्ना भाटिया !
किन आउदै छन् राहुल र मुग्धा एक साथ् काठमाडौं
कुन रोगबाट पीडित छिन् आलिया भट्ट भन्छिन्, कारण बिना नै रोइरहेकी हुन्छु !
अब जिग्रीले मेरो माया होइन घृणाचाहिँ पाउछ : रक्षा श्रेष्ठ
आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर मोडल सोनिका रोकायाले खोलिन तीन करोडको बार !
वक्सअफिसमा महेश बाबुको नयाँ सिनेमा ‘महर्षि’ सुपरहिट, कमायो सय करोड भन्दा बढी !
अझै कुमारी छन् साउथका यी ६ हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्रीहरु ?
यि हुन् बलिउडको भन्दा बढी कमाई गर्ने दक्षिण भारतीय चलचित्रहरु !
दोश्रो केजिफ झन् भव्य हुने छ : यश
निर्देशक राजमौलीको ‘RRR’ बाट साउथ फिल्ममा आलियाको डेब्यु, साथमा छन् अजय देवगन पनि !
महेश बाबुले छाडेपछि ‘आर्या’ निर्देशकको नयाँ सिनेमामा अल्लु अर्जुनको ‘ईन्ट्री’